Shenzhen Sichi Technology Co., LTD.was dia niorina tamin'ny taona 2000.Mandray anjara mavitrika amin'ny 1-32 sosona PCB izahay, ny fikojakojana sy ny fampivelarana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra, ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fitaovan'ny fifandraisana an-tariby. Izahay dia iray amin'ireo matanjaka indrindra ary Orinasa manan-kery miaraka amin'ireo orinasa toy ny serivisy fijanonana tokana amin'ny fivoriambe PCB, kopia PCB, clone PCB, vaky IC, famolavolana PCB, famoahana IC, famolavolana chip, fanodinana SMT, famokarana PCB, famokarana prototype ary fanafoanana.
Raisinay "Ny kalitao dia ain'ny vokatra, ny fisaorana dia fanahin'ny orinasa" toy ny filôzôfia amin'ny raharaham-barotra, manolo-tena izahay hanome ny mpanjifa vahaolana ambony, vokatra sy serivisy ambony. Miara-miasa am-pirahalahiana amin'ireo orinasa 500 malaza eran-tany izahay, toeram-pikarohana siantifika malaza. sy ny oniversite.
Ahoana ny fiasan'ny fizotran'ny Clone PCB?
Step1, raisinay ny tabilao ohatra ary esorinay hiala amin'ny solaitrabe ireo faritra rehetra ary manamboatra fitaovana (BOM) volavolan-dalàna.
Avy amin'ny tovona pui- mamaritra ny fitaona ho avy mialohan'ny aôrisitry ny endriky ny atao, ny fototeny böt; ny tovana -of izay mamaritra ny mpanao (mpanao fahatelo amin'ny bika ambehivavy); ary ny tovana -s mamaritra ny ploraly
Step2, ampiasainay ny fizotran'ny fanananay mba hanaovana rakitra PCB na fisie Gerber.
Step3, raha vantany vao manana ny PCB File sy ny BOM List isika dia afaka manamboatra rakitra skema.
Aorian'ny PCB Copy, azontsika atao ihany koa ny maka ny kloneinao amin'ny zava-misy amin'ny alàlan'ny fanamboarana PCB ary serivisy fivoriambe PCB. Hanome ny vidiny IHANY izahay aorian'ny fahazoana ny BOM, manao politika izahay hanome ny vidiny IHANY rehefa vita ny BOM. Izany no fomba tokana ahafahana miantoka ny vidiny marina.